Abkhazia edolobheni. I zokungcebeleka main
Ukukhethwa Abkhazia njengoba indawo yokuphumula noma uswidi - kukho ehloniphekile. Lapha nature enhle ngokumangalisayo, okusezingeni eliphezulu ezintabeni, efudumele ulwandle. Imizi elikhulu Abkhazia, okuyinto evakashela amaholide unyaka nonyaka - Gagra, Novy Afon, Pitsunda Gudauta, Sukhumi. Inhloko-dolobha ye Abkhazia, Sukhumi kuyinto.
Izwe waziwa ngokuphulukisa yayo iziphethu. Ngenxa lokuvikeleka kwezifiso ezisemqoka ezingumphumela Omkhulu eCaucasus kule endaweni efudumele ungakhululeka kuze Okthoba. Izintaba futhi uyephuza umoya ukudala microclimate ephelele. Abkhazia, idolobha resort okuyinto ethandwa kakhulu phakathi izivakashi, idume izimila yayo ocebile nakwezifudumele, sezulu emnandi futhi esikhumbuzo yezakhiwo. Sibala isiqondiso main.
Gagra - yokungcebeleka edume, lapho kangcono uphumule intsha, imindeni enezingane. Kukhona amahhotela eziningi kanye zokungcebeleka, ihlelwe izinkambo Abkhazia. Nge ngenhloso yokwelapha ithunyelwa lapha ukuqeda izifo gynecological, urogenital, isimiso sezinzwa futhi senhliziyo.
Ngo-1902 lapho yasungulwa enqabeni ePrince of Oldenburg, ukuthi kwaba ukuqala kokudaliweyo edolobheni resort of Abkhazia, efana French Nice. Isimo sezulu efanayo ngempela izimo sezulu Nice. Kodwa lapho kugqashuka inguquko elixutshwe umenzi ikhadi. Namuhla, bashiya wokwakha, kodwa akalilahlile Luhambo yayo izivakashi.
New Athos - Old Town. Wik ukuchayeka, cypresses, azithele ngabandayo, zikagamthilini kanye nezinye izimila emzini Abkhazia kwesokunxele okuvelayo ocacile nezivakashi ukuba zivakashe lapha. Ezikhangayo nazi okusha Athos Monastery futhi Umgede. Le nganekwane ithi emhumeni kungaba wedwa Simon Kananit. Lokhu ingaphakathi, okuyinto has a umsuka karstic, kuyinto olunothile kakhulu, it siqukethe amakamelo ayisishiyagalolunye. Futhi ogwini okusha Athos kuyinto esontweni omuhle.
yokuhlala Basic endaweni yokulala - engxenyeni ezimele. Ezokungcebeleka kancane, kukhona amahhotela eziningana.
Pitsunda kungcono ukukhetha abalandeli ethule, iholide eziphumulele. Kukhona ezikhulayo abadumile Pitsunda zikaphayini. Umoya enempilo kuhle nabantu isifo samaphaphu kanye komzimba.
Zonke Ezokuzijabulisa, kanye amathilomu, izindawo zokudla igxile Pitsunda chibi. Lapha kukuhle baphumule izingane, ngaphandle zokudlela lendawo ababevame ukunikela imenyu yezingane. Yini ukubona e Pitsunda? Cathedral wezinzalamizi ne eqoshiwe ezithakazelisayo, yesibani, ebaziwe "Medea", "Stone Girl" futhi "abatshuzi".
Umuzi Sukhum, eyasungulwa ekhulwini VI, nge ingqalasizinda athuthukile, bekulokhu kukhanga izivakashi njalo. Ubizwa engadini ngokuyinhloko Botanical ezaziwayo. Eza lapha ngenhloso yokuthuthukisa. Sukhumi - elihle spa resort. Yini ukubona? Amasonto namathempeli amaningi amathempeli, kwaleli chibi Muhajirs, izakhiwo ezahlukene ubudala, okuyizinto esikhumbuzo yezakhiwo.
Kodwa isithakazelo akuyona kuphela emzini Abkhazia. Iparele isifunda esiseningizimu - liphezulu ezintabeni Lake Riza. Uhambo ihlelwe lapha kusuka kunoma iyiphi idolobha. Ukuze ugweme ukudideka kuleli zwe, kuzosiza ibalazwe Abkhazia kanye nemizi. Nobuhle Ritsa ushiye akekho ngabandayo. Ukuya echibini, udinga ukugqoka ukuhamba izicathulo ezifanele futhi izingubo ezifudumele, unikezwa ukuthi Ritz liphezulu ezintabeni.
Inhloko-dolobha ye Thailand Bangkok - lalisemzileni oya ezimayini South-East Asia
Sibhedlela Volgograd esifundeni. "Volgograd" sibhedlela. Sibhedlela "Dubovka" Volgograd esifundeni
Zakopane, Poland. Tours ePoland. Zakopane - Ski resort
Carnarvon Castle (Wales): Uma amatshe ongakhuluma naye
Cathedral of the kukaJesu Blessed Virgin Mary, Rostov-on-Don: incazelo, umlando
Nezokungcebeleka isikhungo, Cheboksary, "Zaimka" / "Zaimka": yini izivakashi?
Ukufakwa kwe-Tube ngokufakelwa kagesi kwisayithi noma endlini
50 izinto akufanele kube, uma phezu amathathu
I-window window sill: ukuhlanganiswa ngezandla zomuntu siqu
Izimoto "Hyundai": ububanzi
Okuthusayo ngezilwane kusukela isilwane sasemanzini okubi - One Shot
Kevin Jonas - umculi odumile futhi ubaba onothando
Okubaluleke kakhulu sezulu endlini ...